Dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay Garbahaarrey oo xaaladdooda caafimaad laga deyrinayo
Gedo 16 Apr, 2012Waxaa laga deyrinayaa xaaladda caafimaad ee illaa 9 ruux, oo ka mid ahaa dadkii sida daran ugu dhaawacmay 4 qarax oo is xigay oo ka dhacay gudaha degmada Garbahaarry, ee xarunta gobolka Gedo.
Qaraxyadaasi oo sababay dhimashada illaa saddex qof, ayaa midkii ugu horreeyay wuxuu ka dhacay goob maqaayad ah, waxaana xigey saddex kale oo goobaha lala beegsadey ay ka mid ahaayeen suuqa magaalada, iyo goobo ganacsi oo ay ku yaalleen dukaamo. Afar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadaasi, ayaa xaaladdooda laga deyrinayaa, kuwaasi oo loola cararay magaalada Mandheera ee gobolka Woqooyi bari Kenya, si ay u helaan adeegyo caafimaad.
Aadan Maxamed Xaashi (Aadan Goomey) oo ah maamulaha isbitaalka degmada Garbaahaarrey oo u waramayey Raadiyo Ergo, ayaa sheegay in qaraxyadaasi oo ahaa kuwii ugu darnaa ee ka dhaca deegaanka, oo ay waxyeello ka soo gaartay dad rayid ah oo fadhiyay maqaayado iyo goobo ganacsi. Aadan, ayaa intaas ku daray in dadkii dhaawacyada ugu liitay loo qaaday dhinaca degmada Mandheera, maaddama dhaawacyada soo gaaray dadkaasi ay yihiin kuwo halis ah, isagoo sheegayn in qaar ka mid ah dadka dhaawaca ahna ay ku daaweynayaan isbitaalka degmada Garbahaarrey, oo xilligani daawo yari ay ka jirto. Qaraxyada ka dhacay Garbahaarrey, ayaa waxay saameyn ku yeesheen oo weli xiran adeegyadii ganacsiga iyo waxbarashada.
Degmada Garbahaarrey ee gobolka Gedo, ayaa muddo haatan laga joogo sanad waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda ku meel gaarka ah, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna ay ka soo cusboonaadeen isku dhacyo. Axmed Cumar Saalixi/FM